Wararkii ugu dambeeyay xiisadda u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland oo wali ka taagan Sanaag | Hohad News
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland oo wali ka taagan Sanaag
March 13, 2019 - Written by Hohad Office
WARARKA DALKA(HOHAD NEWS)
Waxaa wali taagan xiisadda u dhaxeysa maamulada Somaliland iyo Puntland oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo labada dhinac ay isku heystaan.
Xiisadda ayaa ka dambeysay kadib markii Somaliland ay ciidamo dheeraad ah geysay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo labada maamul ay isku hayaan, waxaana ciidamada ugu badan ay geeyeen deegaanka Yubbe oo ka tirsan Sanaag.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Puntland dhankooda ay dhaqdhaaq ka bilaaben deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, waxaana arintaasi ay abuurtay cabsi soo wajahday dhinacyada dagaalamaya.
Labada maamul ayaa shalay warbaahinta isku mariyay jawaabo adag oo ku aadan xiisadda ka taagan deegaanada gobolka Sanaag, waxaana maamulka Puntland uu ku eedeeyay Somaliland Daandaansi inay ka wado gobolka Sanaag.
Taliyaha Ciidamada Somaliland ee Bariga Gobolka Sanaag ayaa isagana waxaa uu sheegay in Ciidamada ay yihiin kuwo ilaalinaya xaduudka Somaliland oo uu sheegay inaysan aqbaleyn in lagu soo xadgudbo.
Puntland ayaa Warsaxaafadeed ay shalay soo saartay waxaa ay sidoo kale ku sheegtay in Somaliland ay dooneyso inay wiiqdo howlgallada Puntland ay kula dagaalameyso waxa loogu yeero argaagxisada, hayeeshee ay dul qaad muujin doonaan.
Ciidamada labada maamul kaga sugan gobolka ayaa wada dhaqdhaqaaq ciidan waxaana saacad kastaa laga baqayaa inay markale ku dagaalamaan gobolka Sanaag.